सिरियामा इजरायली आक्रमणः १० जना मारिए - Narayanionline.com Narayanionline.com सिरियामा इजरायली आक्रमणः १० जना मारिए - Narayanionline.com
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छः मन्त्री श्रेष्ठ
सांसदको प्रश्नः किसानले मल र जनताले नागरिकता कहिले पाउँछन् ?
सिरियामा इजरायली आक्रमणः १० जना मारिए
१९ जेष्ठ २०७६, आइतबार
बेरुत, जेठ १९-
इजरायलले सिरियामा आइतबार छिमेकी मुलुक सिरियामा गरेको हवाई आक्रमणमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । इजरायली सेनाका अनुसार मारिएकाहरुमा सिरियाली सेना र विदेशी लडाकूहरु रहेका छन् । सिरियाबाट इजरायली अधीनस्थ गोलान हाइट्सको माउन्ट हर्मनमा रकेट आक्रमण गरेपछि इजरायलले हवाई आक्रमण गरेको इजरायली सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इजरायलले सिरियाका दुईवटा सैनिक अखाडा, गुप्तचर पोस्ट र एसए–२ हवाई प्रतिरक्षा अखडामा आक्रमण गरिएको उल्लेख छ । बेलायतस्थित एक युद्ध अनुगमनकर्ता निकायका अनुसार सिरियाको राजधानी दमास्कस नजिक हवाइ आक्रमण गरिएको र त्यहाँ सिरियाली सैनिक, इरानी सैन्य तथा हेजबुल्लाह लडाकूहरु रहेका छन् ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आफूले हवाई आक्रमण गर्न आदेश दिएको बताएका छन् । उनले आफ्नो भूमिभित्र कसैले आक्रमण गरे त्यो सह्य हुन नसक्ने बताउँदै इजरायलभित्र कसैले आक्रमण गरे त्यसको डटेर प्रत्याक्रमण गर्ने स्पष्ट गरे । इजरायलले सिरियामा सयौं हवाई आक्रमण गरेको थियो । यी आक्रमणहरु मुख्यतः सिरियामा रहेका इरानी र हेज्बुल्लाह लडाकू विरुद्ध केन्द्रित छन् । रासस\_एएफपी
के चीनले चन्द्रमालाई आफ्नो क्षेत्र घोषणा गर्न सम्भव छ ?
कतारस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई भन्यो– सार्वजनिक स्थलमा मास्क लगाउ
प्रचण्डले परिवारबाटै चारजनालाई पोलिटव्युरो सदस्य बनाएको भन्दै विरोध
बजेट मन्त्रीको सेरोफेरोमा राख्ने, जनताले स्वच्छ पानी कसरी पाउने ?